जगदम्बा स्टिल्सले ल्यायो ग्याल्भा प्लस र सुपर साइन - Aathikbazarnews.com जगदम्बा स्टिल्सले ल्यायो ग्याल्भा प्लस र सुपर साइन -
जगदम्बा स्टिल्सले ल्यायो ग्याल्भा प्लस र सुपर साइन
शंकर समूहको जगदम्बा स्टिल्सले नयाँ प्रविधिमा आधारित जस्तापाता बजारमा ल्याएको छ। जगदम्बा ग्याल्भा प्लस र जगदम्बा सुपर साइन बजारमा भित्र्याएको हो। यसका लागि कम्पनीले केही समय अघि मात्रै सिमरामा अत्याधुनिक प्लान्टको स्थापना गरेको थियो।
वार्षिक तीन हजार टन उत्पादन क्षमताको शंकर समूह देशकै ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी हो। साथै, स्लिट रोलिङ प्रविधिबाट टीएमटी बार उत्पादन गर्ने नेपालको पहिलो कम्पनी पनि शंकर समूह भएको बताइएको छ। जगदम्बा ग्याल्भा प्लस, प्रिमियम एल्युमिनियम–जिंक कोटेड सिट जसलाई ग्याल्भल्युम पनि भनिने कम्पनीले जनाएको छ।
‘एक अलोय कोटिङ गरिएको उत्पादन हो। जसमा तौलको हिसाबले ५५ प्रतिशत एल्मुनियम, ४३.५ प्रतिशत जिंक र १.५ प्रतिशत सिलिकन मिश्रित हुन्छ। जगदम्बा ग्याल्भा प्लस नेपालमा अत्याधुनिक रुफिङ उद्योगमा नयाँ आयाम हो, जसले फलामलाई अक्सिडेसनबाट बचाउँदछ। परिणामस्वरूप उत्पादनलाई सामान्य उत्पादनको तुलनामा १० गुणा बढी टिकाउ बनाउँदछ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विभिन्न रंगको विकल्पमा उपलब्ध ग्याल्भा प्लस लाई भने जगदम्बा सुपर साइनको नाम दिइएको कम्पनीले जनाएको छ। एल्मुनियमले जगदम्बा ग्याल्भा प्लस वा जगदम्बा सुपर साइनलाई नेपाली बजारमा उपलब्ध साधारण ग्याल्भेनाइज्ड स्टील भन्दा भिन्न बनाउने दाबी कम्पनीको छ।
जगदम्बा ग्याल्भा प्लस नेपालको पहिलो स्वचालित अत्याधुनिक ग्याल्भल्युम लाइन प्रक्रियाबाट उत्पादित पहिलो एल्युमिनियम–जिंक कोटिङ भएको कम्पनीले जनाएको छ।
जगदम्बा स्टिल्सले आफ्ना उत्पादन तेस्रो देशमा निर्यात समेत गर्दै आएको छ। जगदम्बा स्टिलका उत्पादनहरु, जगदम्बा सुपर साइन र ग्याल्भा प्लस रोमानिया, युएई, दक्षिण अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, इटाली र म्यानमारमा उच्च मागका साथ आपूर्ति हुन थालेको कम्पनीले जनाएको छ।
जगदम्बा ग्याल्भा प्लसको प्राथमिक फाइदा यसको खिया प्रतिरोधात्मक विशेषता भएको जिकिर कम्पनीको छ। जगदम्बा ग्याल्भा प्लस एन्टी–कोरोजन प्रविधिसहित निर्माण गरिएको बताइएको छ। एल्मुनियमको प्रयोगले कोटिङको खिया प्रतिरोधात्मक क्षमता दुई गुणाले वृद्धि गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
जगदम्बा ग्याल्भा प्लसले पातामा अधिक तौल नथिप्ने, उच्च मजबुती र वजन अनुपात कायम राख्ने कम्पनीले जनाएको छ। जगदम्बा सुपर साइन प्रिमियम रंङद्वारा कोटिङ गरिएका पाताहरूले उत्कृष्ट रङ प्रविधि (सुपिरियर पेन्ट टेक्नोलोजी) प्रयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
उक्त पेन्ट प्रविधिले पेन्ट फुट्न र चर्किनबाट रोक्ने बताइएको छ। यो प्रविधिले धेरै वर्षसम्म छानालाई नयाँ राखी घरलाई अतिरिक्त सौन्दर्य प्रदान गर्ने दाबी कम्पनीको छ।
जगदम्बा सुपरसाइनको सतहमा एक सुरक्षात्मक ‘गार्ड फिल्म’ प्रयोग गरिएको बताइएको छ। जसले गर्दा ढुवानी र भण्डारणको समयमा सम्भावित क्षतिलाई रोक्ने बताइएको छ।
होन्डाको आकर्षक उपहार योजना, बम्परमा रु. ७ लाख
हिरो र होण्डा मोटरसाईकललाई चुनौती दिँदै टिभिएस मोटरसाईकल र स्कुटरको चमत्कारः आयो एक्स–टी स्कुटर जसले टिएफटी स्किनमै क्रिकेट स्कोर देखाउने ?
नेपाल लाइफको २१औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, १४ प्रतिशत बोनस शेयर पारित
गाडी लगायत तीन सय भन्दा बढि बिलासीलताका सामानको एलसी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित बन्द गर्दै राष्ट्र बैंक, यसबाट अर्थतन्त्र थप धरासायी हुनेः २ खर्ब ५० अर्ब राजश्व गुम्ने खतरा !
गत वर्षको चौथौ त्रैमासमा ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुटबाट ९ अर्ब भन्दा बढीको योगदान भएको र हालसम्म ८१ अर्ब पुनकरर्जा स्वीकृत : गभर्नर
कोरोनामा पनि भाटभटेनीको ठग्न छोडन सरकार